Hordhac – Garanuug
Home / Bayooloji 1 / Hordhac
Ku Saabsan Ereybixinta Buuggan
Ereybixinta buuggan ku qoran waxa ay ka timid buugaag dugsiyeedkii iyo qaamuusyadii ereybixineed ee ay diyaarisay wasaaraddii waxbarashadu siddeetameeyadii. Iyada oo ay taasi jirto, waxaa muuqata in ereyada qaarkood ay u baahan yihiin dib u eegid. Ereyadaas waxaa ka mid ah:
Sida buugaagtii hore ku qoran, erayga “moqor” waxa uu ku beegan yahay erayga “vesicle” oo ah xuub yar oo hoor iyo wax la mid ahi ku jiraan, kaas oo ay unugyadu u adeegsadaan qaab la mid ah adeegsiga bacaha aynu alaabta ku qaadanno. Qaamuuska af Soomaaliga ee Prof. Cabdalla Cumar Mansuur iyo Annarita Puglielli waxa uu ereyga “moqor” u qeexayaa sidatan:
“Moqor m.l (-rro, m.dh) 1. Dalool yar oo jirridaha dhirta waaweyni yeelato oo kolkii biyaha roobku galaan dhuuno lagaga cabbo. 2. Dululaati hulan oo ku dhex jira jidh adag.”
Waxaa jira erey kaga habboon buuxinta booskaas, waana ereyga “xashin”. Sidaas awgeed, buuggani ereyga “vesicle” waxa uu ku Soomaaliyeeyey “xashin”, kaas oo uu qaamuusku u fasirayo sidan:
“Xashin m.dh (-imo, m.l) Maqaar harag ari oo laysku tolay ka samaysan oo lagu kaydiyo abuurka birqalaxda iwm.”
Isla sidan ayaa buugaagtii hore waxa ay ereyga “vacuole” ku beegeen ereyga “dalool”. In kasta oo uu yahay dalool hulan oo xuub ku wareegsan yahay, shaqada uu qabto ee kaydinta biyaha iyo wixii la mid ah ayaa ereyga “vacoule” ka dhigaysa mid ku beegmi kara ereyga “moqor”. Sidaas awgeed, buuggani waxa uu “vacuole” ku beegayaa ereyga “moqor” oo kaga habboon kii hore ee ahaa “dalool”.
Waxaa jira labo erey oo aan ereybixintii hore ku jirin, kuwaas oo aannu ereybixin cusub u samaynay. Ereyga “stroma” waxa aannu ku beegnay ereyga af Soomaaliga ah ee “axal”, ereyga “granum” isagana waxa aannu u adeegsannay ereyga “raso”.